Palestina : Maka bahana … mitifitra [sary] … dia nahamarika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2008 0:30 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, বাংলা, Español, English
Nampitombo isa ny fandresena norombahan'ny ady hoan'ny rariny ara-sosialy [social justice] i Muna Nawajaa.
Nampiasa itony fakana lahatsary [camera] izay fanomezan'ny fikambanana B'Tselem's Shooting Back project azy, i Nawajaa izay Ramatoa Palestiniana iray, dia naka lahatsary ireo olona misaron-tava izay nidaroka sy nanao herisetra ny sasany amin'ny fianakaviany, vokatr'izany dia nanokatra fikjatsahana ny Pôlisy Israeliana ary efa voasambotra ireo mpanao herisetra ankehitriny.
Uriel Hellman no nanao lahatsoratra ao amin'ny gazety JTA's Telegraph blog, izay nampitondrainy ny lohateny hoe “fakana lahatsary toy ny fitaovana enti-miady” :
There’s just one problem: Nobody’s interested in how people in those places are beaten, murdered and maimed — and, in some cases, the persecution is carried out by their own governments. B’Tselem, or at least the United Nations, would do well to protect those innocents as well.
“Alaivo sary an-tsaina kely ange raha apariaka amin'ny faritra arabo [Moyen-Orient] ity foto-drafitrasa iray ity, dia ho voatery mandray fepetra hanoherana ireo mpanao herisetra izay mikendry ireo tsy manantsiny anivon'ny fiaraha-monina Arabo, toa izay nataon'i Israely avokoa ireo fitondrana any Riyad [Arabia Saodita] sy le Caire.”
Ny indro kely fotsiny (hoy ilay mpandrafitra) dia tsy misy mivaky loha izay fanaovana herisetra, na famonoana na fampijaliana izay mponina avy amin'iny faritra iny (izao tontolo izao) – ary ny tena loza aza tsindraindray dia ny fanjakana mihitsy no ao ambadik'ireny fampijaliana samihafa ireny. Ny fikambnana B'Tselem, na fara-faharatsiny ny Firenena Mikambana [ONU] dia tokony handray fepetra hiarovana koa ireo tsimanantsiny hafa ireo.”